देशहितमा काम गर्दा किन प्रधानमन्त्री ओलीकैबिरुद्ध उत्रन्छौं महासय ? « Janata Times
नेपाली जनताले नेताहरूप्रति उच्च विश्वास जाहेर गरेका छन् । यो विश्वास उत्तेजना वा भावुकताको भुमरीमा परेर गरेको होइन । नेताहरूको अटुट लगन, त्याग र ब्यवहार हेरेरै जनताले विश्वास गरेका हुन । अहिलेको सरकारमा रहेका नेताहरू पनि जनविश्वासको जगमा उभिएर, जनताको मतबाट निर्वाचित भएर त्यस ठाउँमा पुगेका हुन । कसैले टपक्क टिपेर थुपुक्क राखिदिएको होइन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनले ब्यवस्था परिवर्तन गर्यो, गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यसपछि जनतामा अथाह चाहनाको सागर उर्लियो । तर, गणतन्त्र प्राप्ति पछि पनि सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बन्ने निरन्तरता रोकिएन । जसले गर्दा जनता निराश हुन थाले, नेताहरू प्रतिको विश्वास डगमगाउन थाल्यो ।
विस वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन, पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन, मुलुक झन् दुर्गतितिर जाँदै थियोे । देशी विदेशी शक्ति संविधान जारी हुन नदिन प्रयासरत थिए । तथापि यस्तै बेलामा संविधान जारी भयो, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । बल्ल जनताले स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई बहुमत दिएर पठाए । र, वर्तमान सरकार जनताको सरकार भएकाले अहिले जनअपेक्षा अनुरुप काम अघि बढाएको छ । तर, वर्षाैंदेखि चुलिएको जनचाहनालाई संबोधन गर्न समय लाग्नु स्वभाविकै हो । हुन पनि भत्किएको सवृद्धिको बाटो, बिग्रिएका संरचना, मौलाएको अराजकता र फस्टाएको भ्रष्टाचारका कारण कतिपय काममा यो सरकार अत्यन्तै लोसे देखिन्छ । तर, आत्तिइ हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन ।
अहिले यो सरकारलाई असफल बनाउन चारैतिरबाट आक्रमण भई रहेको छ । “के गर्दा राम्रो हुन्छ ?” भन्ने विषयमा कसैले सल्लाह सुझाव दिएको देखिदैन । बडा ननिका शब्दहरू छानेर सरकार र यसका सञ्चालकहरूलाई अमर्यादित ढंगले खुइल्याउने काम भने फस्टाएको छ । हिजोआज कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहार, कसैलाई बोली, कसैलाई हिडाई र कसैलाई लगाई मन परेको छैन । कसैकसैलाई त प्रधानमन्त्रीको सासै गन्हाउँछ । कसैलाई मन्त्री बोलेको सुन्दा ज्वोरो आउँछ । अनि कोही बौद्धिक भनिने ब्यक्ति झन्डावाल गाडी देख्ने बित्तिकै आफ्नो कुहिगन्धे डकार फ्याँक्छ, “हेर हेर भुक्के चप्पल लगाउनेको रवाफ ।” अझ च्याँठ्ठिएर भन्छ, “यस्ताले कसरी राष्ट्रको विकास गर्छ ? देख्नु भयो यिनीहरूको ताल” ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ब्यक्तिबाट कमीकमजोरी हुदैँ हुन्न भन्न खोजेको भने होइन । काम गर्नेबाटै हो कमीकमजोरी हुने । कामै नगर्नेबाट केही हुँदैन । भन्न खोजेको के हो भने कुन काम गर्दा कहाँ गल्ती भयो ? त्यसलाई औंल्याउने र सँच्याउन लगाउने दायित्व सबैको हो । तर, कुनैलाई ब्यक्ति, पार्टी, हिडाई वा बोलाई मन नपरेकै आधारमा सरकारले गरेका र गर्न खोजेका राम्रा काम पनि मन पर्दैन भने त्यसको ओखती त के होला र खै !
अब अहिलेको बजेटमा विरोध गर्ने बुँदाहरू छैनन् कि कसो, एकथरी भन्दैछन् “कार्यन्वयन नै हुँदैन”, अर्काथरी भन्दैछन् “कनिका छरे जस्तो” र तेस्रो खाले भन्दैछन् “दाताले दिन्छ भनेर तयार गरेको बजेट, दिएन भने के गर्छ रु” सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका यस खालका तर्कले कुनै अर्थ राख्दैन । बजेटले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्दैन भने त्यो चाहिँ घातक हुन जान्छ । र त्यस्ता विषय भने सरकारले सच्याउनै पर्छ ।
केही बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरु छन् जो केपी शर्मा ओलीको निरन्तर विरोध गर्नका लागि कतै स्थायी जागिर खान्छन् । उनीहरु गानो जाने गरी सरकारलाई त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारे हात लगाएर सरापी रहेका हुन्छन् । प्रतिपक्ष वा सराप्नका लागि नियुक्त जागिरे बौद्धिक मात्र होइन, कतिपय आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत कन्दनी कसेर ओलीको विरुद्धमा उत्रिएका छन्
(लेखकको अनुमतिमा परिसंवाद डट कमबाट साभार)